Muxuu ahaa heshiiskii la yaabka lahaa ee uu Ronaldinhola la galay kooxda Flamengo? – Gool FM
Muxuu ahaa heshiiskii la yaabka lahaa ee uu Ronaldinhola la galay kooxda Flamengo?
(Brazil) 02 Maajo 2020. Ronaldinho ayaa Flamengo la galay heshiis la yaab leh markii uu ku biirayay, waxaana heshiiska uu haleyga reer Brazil la galay kooxda dalkiisa ka dhisan lagu daray in toddobaad walba labo habeen loo fasaxo inuu aado xafladaha habeenkii ee la isugu tago kalaabyada.
Xiddiggii hore ee Barcelona ayaa Flamengo ku biiray sanadkii 2011 kaddib saddex xilli ciyaareed oo uu ku qaatay AC Milan.
Sida laga soo xiganayo beIN Sports, ku guuleystaha Ballon d’Or ayaa caddeeyay inuu iska diidi lahaa heshiiska Flamengo haddii aysan aqbali lahayn dalabkiisa ah in toddobaad walba uu labo habeen ku soo baashaalo kalaabyada.
Ronaldinho ayaa aqbalaad kaddib kooxda reer Brazil u dhaliyay 19 gool sanadkiisii koowaad, iyadoo loogu darayo 13 caawin.
Laacibkii hore ee Barca iyo Milan ayaa hadda xabsi guri ugu jira dalka Paraguay kaddib markii lagu qabtay baasaboor been abuur ah, balse waayihiisii ciyaareed ayaa lahaa madaddaalo dhammeystiran.
Dhanka kale, mid ka mid ah taageerayaasha Roseneri oo la hadlay Bleacher Report ayaa qiray 40-jirkan uu lahaa dabciga ah caweyska uu habeenkii ku soo qaato kalaabyada, xitaa haddii kulankii todobaadkaas laga adkaaday kooxdiisa.
Juventus oo dooneysa in Man United ay Pogba kaga qaataan iyagoo aanan lacag siinin, iyo koox kale oo qorshahaas la fahansan
Kepa Arrizabalaga oo afka furtay kana hadlay xiriirka u dhaxeeya isaga iyo tababare Frank Lampard